Claude Bernard University Lyon 1 - Study muFrance, Europe
guta : Lyon
Musakanganwa kuti kurukura Claude Bernard University Lyon 1
Kunyoresa pana Claude Bernard University Lyon 1
Claude Bernard Lyon 1 ndiyo yunivhesiti kuti anopa kudzidzisa 40,000 Vadzidzi pagore muminda zvesainzi, utano uye mutambo. Claude Bernard Lyon 1 Est mugove Lyon University, anokosha French University nzvimbo kunze Paris nharaunda.
Aratidza yakasimba zvedzidzo mukurumbira zvose muFrance uye munyika yose, Claude Bernard Lyon 1 University iri nguva handichanyatsogoni miganhu ruzivo,kusimudzira dzidzo kuburikidza tsvakurudzo uye nguva dzose kukurudzira Nhaurirano pakati sayenzi vanhu.
Claude Bernard Lyon 1 ari University upenyu kurarama zvizere. Its pazvikoro, riri mumwoyo kunoshamisa munharaunda, vakasvinuka nzvimbo dzakawanda mabasa, zvichiita vadzidzi kuumba uye vabudirire nepfungwa pachako kuzadzika. The University Lyon 1 riri pamusoro 13 siyana nzvimbo ina chikuru nzvimbo basa Rhone-Alpes mudunhu France : maguta Lyon, Saint-Etienne uye Bourg-en-Bresse uye guta Roanne. The University zvikuru runobatsira kukura munharaunda ino kuburikidza kudyidzana ayo makambani omunharaunda uye omunyika uye vepurovhinzi.
Lyon 1 anoshandisa 2900 mudzidzisi / vaongorori nevadzidzisi, izvo 700 ndiwo chipatara vanoita uyewo hwokugadzira uye administrative tsvimbo 1800. Lyon 1 akazova zvionera pakagadzwa musi 1st January 2009 uye ane zvachose bhajeti pamusoro 405 M € Lyon 1 mumwe mukuru vashandirwi yacho.
A kugamuchira yunivhesiti, vane zvidzidzo zvinoenderana vanhu zvinodiwa
Lyon 1 vomuSouth mudzidzi angasvika 40.000. 54% vomunyika iyi munhukadzi uye 18% kugamuchira mudzidzi Grant. Lyon 1 Anozvikudza kuverenga hombe inorwara vadzidzi vokune dzimwe nyika (10,5% Vadzidzi dzayo, pamusoro 134 vemunyika).
Inenge 80% vadzidzi vasarudze yekosi zvirongwa : Lyon 1 unobereka kwete zvishoma pane 9250 Vakapedza pagore.
Chidzidzo zvirongwa zvavanokwanisa ari utano sayenzi nokukuyeuchidzai kupa kuenda raora ari dzokurapa ounyanzvi hwokugadzira (chiremba rwokurapa, mutengesi wemishonga, chiremba wemazino, nyamukuta) uye paramedical ounyanzvi hwokugadzira (audioprosthesist, ergotherapist, physiotherapist, kutaura chiremba, orthoptist, physiotherapist nyanzvi psychomotor kusangana).
zvekutepfenyura Lyon 1 kuti sayenzi anopawo guru pakusarudza zvidzidzo: ari DUT dhipuroma anotidzidzisa mu 17 nzvimbo unyanzvi yemberi michina Mamaneja. 57 madhigirii yekosi tsvimborume kuti vagadzirire vadzidzi kuti pakati utariri mabasa. 111 madhigirii tenzi (yekosi, reasearch kana zvabatanidzwa yekosi uye reasearch) gadzirira vadzidzi nokuti mukuru vakuru mabasa kana kuti basa pakutsvakurudza uye kukura. Lyon 1 anopawo refu kwazvo mureza unyanzvi hwebasa chokurovedza mapurani (Polytech Lyon) uye sayenzi actuarial (Isfara).
L'ESPE, mudzidzisi nokudzidziswa pokugadzwa specialized mune yekosi kugadzirira nesekondari vadzidzisi (nyaya dzose).
Lyon 1 mibayiro 300 doctorates pagore vadzidzi migumisiro resarch zvidzidzo zvavo, ichiitwa yeYunivhesiti mumarabhoritari, vari pamwe naye mumaindasitiri kana zvimwe establishments dzidzo.
Uyewo pakupa rakafara kwokutanga Rokutenderwa zvidzidzo purogiramu, Lyon 1 zvaanoripirwa akazvimirira kana kambani wakakombama vadzidzi kuramba nyanzvi kukura nokudzidziswa.
Yezviri kukurudzirwa utsanzi
Lyon 1 ari kuyunivhesiti multidisciplinary kushandisa zvose chinokosha uye kushandiswa kutsvakurudza uye sezvo vakadaro inogona kuzvirumbidza kupfuura 4415 pose rakabudiswa nyaya uye 44 patents pagore. The University ane 68 Hurumende-mari pakutsvakurudza zviumbu kushanda muminda matatu; utano, kwezvakatipoteredza uye zvinhu michina. Mumwe nhamba vezvikwata ndivo mugumisiro kushamwaridzana mumarabhoritari anoverengeka kupinda tsvakurudzo masumbu. Izvi zvinoita seboka izvi zvivako kuva zvikuru vakwanise munda unyanzvi uye kuwana, kana kutenga, yepamusoro tsvakurudzo waivako maturusi pane vaizova zvinogoneka sezvo nomumwe hurongwa.
YeYunivhesiti voga chikamu indasitiri intermediaries, EZUS Lyon1 uye Lyon Engineering Project (muromo) kubatsira Lyon 1 kuti mumarabhoritari kupindura zvinobudirira kunoda norudo kuti dzakawanda tsvakurudzo makondirakiti.
Munyika nepasi rese vakabvuma
The University iri vakazvipira vanopfuura 80 European Union muzvirongwa uye chikamu vachishingaira mu Rechinomwe Pakuumbwa Programme Research uye muruzivo rwokugadzira Development (FP7).
Yemarudzi Chinzvimbo Lyon 1 somuzinda nounyanzvi pakutsvakurudza achangobva akaratidza:
nokuda tsigiro yemari yeYunivhesiti paakavapa neNational Agency for Research,
nokuda yeYunivhesiti kuitawo Category Network nokuda Advanced Research akadana kuchirapa zvakagadzirwa uye Infectiology,
uyewo Category Centres Research uye Healthcare: Neurocap (neuroscience), Centaure (nhego transplantation) uye Synergie Lyon Cancer
uye Institut CarnotI @ L: senga uye nezvinhu zvesayenzi.
Wedzera izvi 6 tsvakurudzo namasumbu vari kuminda rezvoutano (Lyonbiopole), Nanotechnology (Minalogic), kemesitiri uye zvakatipoteredza (axelera), plasturgy (Plastipolis), Textiles (Techtera), mutambo (Sporaltec) uye mabhazi (Lyon Urban Truck uye bhazi 2015).
Rorusununguko Medicine Lyon East
Rorusununguko Medicine uye Maieutic Lyon Sud – Charles Mérieux
Institute of Pharmaceutical uye Biological Sciences
Rehabilitation Institute of Sciences uye Techniques
SAYENZI UYE TECHNOLOGY
Rorusununguko Science uye Techniques mumuviri uye Sports Activities
Financial Science Institute uye Insurance
School of Teaching uye Dzidzo
Unoda kurukura Claude Bernard University Lyon 1 ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Claude Bernard University Lyon 1 pamusoro Map
Photos: Claude Bernard University Lyon 1 pamutemo Facebook
Claude Bernard University Lyon 1 Wongororo
Join kukurukura pamusoro Claude Bernard University Lyon 1.